Ebe Ngoli - NDỊ IGBO KWENU
Home / Featured / Ebe Ngoli
ndiigbokwenu1 April 5, 2016	Featured, NTỤRỤNDỤ Leave a comment 1,320 Views
Ebengoli bụ ihe onyonyo ọhụrụ e ji asụsụ igbo mepụta ilebeanya n’ihe ntụrụndụ na Naijiria.
Ndị nnabata ọbịa bụ ezigbo nwa-afọ igbo Stanley FunnyBone Chibunna, na ọmalicha umuada igbo Chioma Idigo na Nkem Uzowulu. Ha atọ ga enyochaa ihe nile n’eme na ọrụ ntụrụndụ na Naijiria dịka egwu ọhụrụ, nkiri ọhụrụ, ihe nile n’ewu-ewu, na ihe ndị ọzọ.
Ọbụrụ na ihe n’atọ ọchi na amasị gị, e meputara ihe onyonyo maka gị. Ebe Funnybone nọ n’ime ya, onweghi onye kwesiri igwa gị na Ọ ga-abụ ihe na-akpa ọchị. Ebe Ngoli bụkwa ebe ị nwere ike imụta ihe ị nwere ike ime imelite akaoru gị. Na udịrị agwa ị kwesiri ina-akpa ma ọbụrụ na ị chọrọ ka ihe gara nke ọma.
Soro nu Ebengoli na Facebook ma na instagram @ebe_ngoli, Ha ga n’egosi ihe onyonyo a n’ụbọchi Saturday ọbụla ma ọ kụọ 5pm na ohere Africa Magic Igbo, DStv Channel 159
Previous Igbo Amaka Tv Abiawo.
Next Usekwu Igbo nọ ebe a